Ababhali Abali-10 Abebengaziwa Baze Bafa Ngemuva Kokufa Kwabo | Izincwadi Zamanje
Ababhali abali-10 abangazange babonwe kwaze kwaba ngemuva kokushona kwabo
ULidia Aguilera | | Kubuyekezwe ngomhla ka- 15/03/2016 20:58 | Abalobi, Umlando wezincwadi
Inani lababhali abakhona alinakucatshangwa, izigidi zabantu zibhalela ukuzijabulisa noma ukujabulisa abanye. Kodwa-ke, ngenani elikhulu kangaka lababhali, akumangazi ukuthi kukhona abanye ababhala izindaba ezimnandi kakhulu futhi namuhla bayaziwa emhlabeni wonke kepha ngubani, ngesikhathi sakhe, ngenkathi bebhala lezo zincwadi, zazingaziwa ngenxa yokungaziwa, ukusabalalisa okuphansi noma izinkinga eziningi lokho kwakukhona ngaleso sikhathi futhi kwenza kwaba nzima ukuthi umuntu ompofu abonakale.
Namuhla ngethula abali-10 balaba babhali obaziyo impela kodwa izindaba zakhe ezingazange zibe nencazelo kuze kube sekufeni kwakhe.
1 UStieg Larsson (1954-2004)
2 UJohn Kennedy Toole (1937-1969)
3 USalvador Benesdra (1952-1996)
4 U-Andrés Caicedo (1951-1977)
5 UWitold Gombrowicz (1904 - 1969)
6 URoberto Bolaño (1953 - 2003)
7 UCarlo Collodi (1826 - 1890)
8 U-Iréne Némirovsky (1903 - 1942)
9 Inkondlo ka-Edgar Allan (1809 - 1849)
10 UFrankz Kafka (1883 - 1924)
UStieg Larsson (1954-2004)
Kwakungekude kakhulu lapho i- Isaga seMillenium yaqala ukunyathela, iba omunye we-sagas omuhle kakhulu wohlobo lwabaseshi. Le saga inamakhophi angaphezu kwezigidi ezingama-78 athengiswe umhlaba wonke, ngaphezu kwenguqulo yefilimu eyenziwe.
Yebo, lo mbhali wayelwa iminyaka eminingi ukuthi kushicilelwe i-trilogy yakhe futhi kwaze kwaba ngemuva kokufa kwakhe lapho le saga yaqala ukuba nomthelela oyifanele.
UJohn Kennedy Toole (1937-1969)
Mhlawumbe omunye wabalobi obefuna kakhulu ukushicilela, bekuyini lokho Uzibulale ngemuva kwengcindezi angene kuyo lapho enqatshwa ngabashicileli abaningi. Ukube lo mlisa akazange azibulale eneminyaka engama-32, bengizobona ukuthi umsebenzi wakhe kanjani, I- "Plot of Fools" yazuza umklomelo wePulitzer ngo-1981. Lo msebenzi ukwazile ukufinyelela ezandleni zethu sibonga umama wakhe, owuthole ekhabetheni wanquma ukuwushicilela.
USalvador Benesdra (1952-1996)
Ubhekwa njengomunye wabamele izincwadi zase-Argentina, wayengomunye umbhali owanquma ukukhetha indlela yokuzibulala ngo-1996 ngenxa Ukukhungatheka akubona ngemuva kokwenqatshwa kaningi komsebenzi wakhe "Umhumushi" ngoba bathi bekuyiyo Kunzima kakhulu kumfundi zesikhathi.
U-Andrés Caicedo (1951-1977)
Omunye umbhali, kulokhu uColombia, onquma ukuzibulala ngu cabanga ukuphila ngaphezu kweminyaka engama-25 kuyihlazo okomuntu. U-Andrés Caicedo wayengumgxeki wefilimu nomculo. Ngemuva kokuthola ikhophi yencwadi yakho "Umculo omude"Anelisekile ngokwamukelwa akutholile, wanquma ukuphuza amaphilisi angama-60 secobarbital.
UWitold Gombrowicz (1904 - 1969)
Umbhali waqaphela eyakhe inoveli "Ferdydurke", wanquma ukubalekela indawo yezifundiswa. Ngo-1939 wanquma ukuya e-Argentina, lapho ezinsukwini ezimbalwa kamuva kwagqashuka khona iMpi Yezwe II, eyayimvimbela ukuba abuyele ezweni lakhe. Umbhali usinde ngenxa yamaphephandaba ahlukahlukene esikhathi. Izincwadi zakhe sekuphele isikhathi eside zingashicilelwa.
URoberto Bolaño (1953 - 2003)
Wazalelwa eChile, uthathwa njengomsunguli wenhlangano yama-infrarealist. Wayejwayele ukungenela imincintiswano yezincwadi esezingeni eliphansi futhi waba ngomunye wababhali abanethonya elikhulu olimini lwaseSpain. A ngonyaka ngemuva kokufa kwakhe ngemuva kokuhluleka kwesibindi, kwashicilelwa umsebenzi wakhe "2666".
UCarlo Collodi (1826 - 1890)
Intatheli nomlobi weFlorentine, owaziwa ngo "Pinocchio", ingane yokhuni. Ukwenziwa kwale ndaba kwenziwa ukukhokha izikweletu zomndeni wakhe. Ngo-1940, eminyakeni eminingana ngemuva kokufa kwakhe, uDisney wanquma ukwenza le ndaba ivumelane.
U-Iréne Némirovsky (1903 - 1942)
AmaJuda azalelwe eRussia, ashonela emakamu okuhlushwa ase-Auschwitz. Amadodakazi akhe asinda ebuNazini futhi agcina incwajana kanina futhi ngemuva kweminyaka engama-50 baphikelela ukuyifunda, bathola indaba ethi "French Suite" nokuyishicilela ngo-2004.
Inkondlo ka-Edgar Allan (1809 - 1849)
Omunye wabalingiswa abahlonishwa kakhulu emibhalweni, ehlonishwa ngababhali abakhulu njengo-Oscar Wild noma uJorge Luis Borges, uPoe wabhekana namashwa amaningi kwaze kwaba sekufeni kwakhe ngo-1849 ngemuva kokudangala ngokushona komkakhe. Izindaba zakhe kwavela ekuphazamisekeni kwabo kwemizwa okwenziwa utshwala, lapho abhala khona izinto ezethusayo nezingaphezu kwamandla emvelo.
UFrankz Kafka (1883 - 1924)
UKafka wayengomunye wababhali abasha bekhulu lama-XNUMX. Ngemuva kobuntwana obunzima, wabhala futhi washicilela izikhathi ezithile futhi, ngemuva nje kwalokho, kwatholakala ukuthi unesifo sofuba. UDora Diamant ugcine okuningi kokubhala kwakhe kuyimfihlo kuze kube namuhla kusathungathwa amanye amaphepha.
Laba babhali baphila ezikhathini ezinzima, njengoba iningi lathatha isinqumo sokuzibulala noma lafa ngokugula. Okucacayo ukuthi ikhulu leshumi nesishiyagalolunye namashumi amabili kwakungeyona iminyaka yokuphila okulula, yize ngaphandle kwalolo hlobo lwempilo ingxenye enkulu yazo yayingeke yaziwe namuhla ngoba ngenxa yezimo zabo babhala le misebenzi enomthelela onjalo namuhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Bayi-10 ababhali abangaziwa kwaze kwaba sekufeni kwabo
Uhlu olunentshisekelo kodwa ngephutha elithile elibalulekile. 'UFerdydurke' kaGombrowicz akayona neze "incwadi yentsha", yize umbhali wayo wayibhala esemncane. 'Abaseshi Bendle' bakaBolaño yashicilelwa ngo-1998, eminyakeni emihlanu ngaphambi kokufa kwakhe, futhi isivele yamenza waduma impela; lowo abawushicilela ngemuva kokufa kwakhe futhi bamnika udumo oluthe xaxa kwakungu-'2666 '(yize yavela ngo-2004, kuphela unyaka ngemuva kokufa kwakhe).
ULidia Aguilera kusho
Ngibonga kakhulu ngokulungiswa, kubukeka sengathi ngididekile imininingwane engaka ezungeza kwi-inthanethi.
Phendula uLidia Aguilera
Izifundo zikaCarrolian kusho
Elinye iphutha elikhulu. Empilweni, uCarlo Collodi wayaziwa futhi ethandwa ezweni lakhe ngezindaba zezingane zakhe. Ukuthi wayengaziwa emhlabeni wonke akusho ukuthi akazange athole ukuqashelwa kuze kube yilapho uDisney eguqula iPinocchio. Eqinisweni, kunguqulo yokuqala yendaba, lo doli walengiswa ezandleni zeFox neKati, futhi indaba yaphelela lapho. Abafundi abaningi babhala izincwadi becela uCollodi ukuba "avuse" uPinocchio, uCollodi wayilanda futhi wayiqhuba le ndaba, okwenza i-Blue-Haired Maiden yamhlenga. Ukube wayengeyena umbhali odumile ngaleso sikhathi, umsebenzi wawungeke ufinyelele ezinsukwini zethu njengoba sesazi manje.
Phendula ezifundweni zikaCarrolian
Olahlekile ohlwini kwakunguMiguel de Cervantes omkhulu, umsunguli weNoveli Yesimanje ene- "Don Quixote" (1605-1615), okwathi ngesikhathi sakhe wayethathwa njengombhali "wokujabula", okusho ukuthi, usomahlaya, umhlekisi rate, futhi emashumini amaningi eminyaka edlule ngemuva kokushona kwakhe ngo-1616 kwaqala ukwazisa kwakhe njengombhali ojulile, ngokuqukethwe okubanzi kwefilosofi kanye nokufaneleka okukhulu njengomvuseleli wendaba, kwaqala. AbakwaCervantes babefisa ukungafi kwemibhalo empilweni futhi abantu besikhathi sakhe babemthatha kancane baze bambiza nangokuthi "lay nobuchule", okuwukushaywa indiva kokukhomba ukuthi, ngoba wayengenalo ulwazi lwezemibhalo, wabhala umsebenzi omkhulu nge-carom, isimangaliso noma ngengozi. Ithisisi yamanga ehlulwe ngamaqiniso amabili: 1) Wayeyindoda eyayizifundisa enesiko elibanzi lokufunda. 2) Wabhala i- "Don Quixote" enolwazi olugcweleyo nokulangazelela ukufuna ukungafi kwemibhalo okwakungakufaka eqophelweni elisha, okwazi ukufaniswa noHomer, uVirgil, uDante no-Aristophanes. Futhi emakhulwini eminyaka ngemuva kokufa kwakhe wazuza udumo olunjalo, waphupha futhi wakufanelekela.
Phendula u-Estelio Mario Pedreañez
Ababhali abakhulu ababengobungqingili
Imisebenzi kaRay Bradbury iyiswe ebhayisikobho